पहिरोको जोखिममा चौरखानी (भिडियो सहित ) – धौलागिरी खबर
पहिरोको जोखिममा चौरखानी (भिडियो सहित )
धौलागिरी खबर	 २०७७ आश्विन ६, मंगलवार १२:५६ गते मा प्रकाशित 335 0
चौरखानी । म्याग्दीको रघुगंगा गाँउपालिका–८ चौरखानीकी थममाया छन्त्यालको घरको पर्खाल चर्किएपछि कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले पिरोलिनुभएको छ । उहाकी छिमेकी गमती छन्त्यालको आगन दुई चिरा परेको छ ।
‘पहिरोले घर पनि बाङ्गो बनाएको छ,’ गमतीले भन्नुभयो ‘अन्यत्र जाने ठाउँ छैन । घरसँगै पहिरोमा बगिने होकी भन्ने डर छ ।’ ‘पाली पनि छुटेको छ, पर्खाल पनि चर्कीएको छ,’ थममायाले भन्नुभयो ‘के गर्ने, कहाँ जाने अलमलमा छौ ।’ थममाया र गमती मात्र नभएर चौरखानीको पुरै गाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ । फेदी देखि शिरसम्म भित्र भित्र बगेको पहिरोले जमिन छियाछिया बनाएको स्थानीय रामप्रसाद छन्त्यालले बताउनुभयो ।
५२ घर रहेको चौरखानीमा हाल ३० परिवारको बसोबास छ । आधाले घर छोडेर बेनी, पोखरा, काठमाडौ लगायतका ठाउँमा गएर बसेका छन् । गाउँको बिचमा ठाडो चिरा पारेको पहिरोका चौरखानीमा एक वटा समुदायिक भवन र एक वटा घर भत्किसकेको छ ।
गाउँपालिकाको पाँच लाख र स्थानीयको रु. ९ लाख लगानीमा दुई वर्षअघि निर्माण गरिएको सामुदायिक भवन भत्किएको हो । घ्यासीखर्क हुदै चौरखानी जोड्ने गाउपालिकाको रु. १३ लाख अनुदानमा निर्माण भएको पदमार्गमा पनि क्षति पुगेको छ । नरप्रसाद छन्त्यालको घर भत्कीएको र अन्य ११ वटा घरको पर्खाल चर्किएर जोखिममा परेका वडा अध्यक्ष गमान छन्त्यालले बताउनुभयो ।
थमबहादुर छन्त्याल, उद्दिमबहादुर छन्त्याल, चन्द्रबहादुर छन्त्याल, रैमान छन्त्याल, रामप्रसाद छन्त्याल, गमबहादुर छन्त्याल, हर्कमान छन्त्याल, नरमान छन्त्याल, दलप्रसाद बिक र पुर्णमान छन्त्यालको घरको पर्खाल चर्कीएर ढल्किएको छ । भिङखानी भूमे युवा क्लवको खेलमैदान भत्किएको छ ।
दुई किलोमिटर तल रघुगंगा नदीको किनारबाट सुरु भएको पहिरो चौरखानीको शिरमा रहेको पहाडको फेदीमा पुगेको छ । पहिरोले गाउँलाई चिरेर दुई भागमा बिभाजन गरेको स्थानीय रैमान छन्त्यालले बताउनुभयो ।
वि.स २०६४ मा सुरु भएको पहिरो ग्यावीयन पर्खाल र भल ब्यवस्थापन गरेपछि केही वर्ष रोकीएको थियो । पहिरो रोकथामका लागि नाली बनाएर गाउँको भल ब्यवस्थान गरिएको थियो । रघुगंगा नदी किनार र पहिरोका बिच भागमा ग्याबीयन पर्खाल बनाइएको छ । यो बर्ष अत्याधिक बर्षाका कारण पहिरो सक्रिय भएपछि जोखिम बढेको हो । खेतबारी र जंगल चिरा चिरा परेको छ ।
भिरालो पाखोमा रहेको चौरखानीमा पहिरोको जोखिम बढेपछि सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरणका लागि जग्गाको खोजी थालेको रघुगंगा गाउपालिकाले जनाएको छ । थप क्षति हुन नदिन बस्ति स्थानान्तरण गर्न लागिएको गाँउपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
‘नियन्त्रण सम्भव नदेखिएपछि बस्तिनै सार्नका लागि पहल गरेका छौ,’ उहाले भन्नुभयो ‘स्थानीयबासीले रोजेको ठाउँमा भूगर्भबिद्को टोलीले अध्ययन गरेर उपयुक्त भएको सिफारिस गरेको आधारमा स्थानान्तरणका लागि छनौट हुन्छ ।’
पहिरोबाट बिस्थापितलाई घर स्थानान्तरणका लागि संघीय सरकारले रु. एक लाख उपलब्ध गराउने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । अन्यत्र जग्गा नभएकाको लागि निजी जग्गा नपाए संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ ।
यसैगरी रघुगंगा नदीमा आएको बाढीले कुइनेमंगलेको बिभिन्न ठाउँमा रहेका चार वटा झोलुङ्गे पुल बगाएपछि आवत जावतमा समस्या भएको छ ।
बाढीले कटान गरेर पुल भत्काउने र बगाएकाले एक गाउँदेखि अर्को गाउँमा आवत जावतमा समस्या भएको स्थानीय रेशबहादुर बिश्वकर्माले बताउनुभयो ।
‘खाद्यान्न ढुवानी, बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा जान र काम विशेषले छिमेकी गाउमा जान समस्या भएको छ,’ उहाले भन्नुभयो ‘खोलामा जंघार तरेर अथवा पाँच मिनेटमा पुगिने बाटो पार गर्न दुई घण्टा घुमाउरो बाटो हिड्नुको बिकल्प छैन् ।’
दुवाडी र ढाड जोड्ने बन्दीघाटको ७८ मिटर र खरिबोट स्थित ११८ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको छ । एकरातेको ६० मिटर लामो भाकर झोलुङ्गेपुल र छहरी स्थित ७८ मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको एकातर्फको भाग भत्कीएको छ ।
दुवाडी, घ्याँसीखर्क, पात्लेखर्क, चौरखानी, खरिबोट लगायत बस्तिका दुई सय बढी घरधुरीलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ । २०७७ को साउन महिना यता विभिन्न समयमा रघुगंगा नदीमा आएको बाढीले पुल बगाएको हो ।
बगाएको सबै पुल रघुगंगा नदी माथिका हुन् । सबै पुलको दायाँ तर्फको भागमा कटान गरेर बगाएको छ । कुइनेमंगले म्याग्दीको भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गाउँ हो । बाढीले बगाएको ठाउँमा नयाँ पुल निर्माणका लागि निवेदन संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले बताउनुभयो । पुल पुननिर्माणका लागि कादुरी संस्थाले पनि चासो देखाएको छ ।